Kuenzanisa iyo color yeako Mac skrini neiyo X-Rite RuvaraMunki | Ndinobva mac
Kuyera Mac yako screen color neiyo X-Rite RuvaraMunki
Peter Rhodes | | Mac makomputa
Vazhinji vashandisi vanoshandisa Mac yebasa ravo zuva nezuva, uye vazhinji veavo vashandisi vanoita graphic dhizaini mabasa ayo akasarudzika zvekuti shanduko pakati pevara rinoratidzwa pakombuta yavo uye izvo zvakazodhindwa zvinogona kuuraya. Ini ndakanyora chinyorwa ichi mushure mekuita hurukuro nehama yangu Daniel Viera uyo akadzidza Zvemukati Dhizaini. uye ndakave nematambudziko nezvandakafumura pamusoro pabasa rekupedzisira.
Asi kufanana nezvinhu zvakawanda zviri munyika yekomputa, panogara paine mhinduro yakajeka kune rimwe dambudziko. Mune ino kesi tiri kuzokuratidza imwe yeakawanda mavara calibrators e skrini iriko. Isu tasarudza iyo X-Rite RuvaraMunki calibrator uye yakanaka kukosha kwemari.
Mukati meOS X El Capitan, ramangwana macOS Sierra senge yematsutso, zvigadziriso zvinogona kuitwa maererano neruvara rwakaratidzwa pachiratidziri. Pane nzvimbo iri panhare yekudzora Sarudzo dzeSystem> Ratidza> Ruvara, mairi calibration inogona kuitwa nechishandiso chakagadzirwa naApple chairo. Nekudaro, aya ma calibration haana kunaka sezvaanofanirwa kuve uye iwe unofanirwa kushandisa ziso remagetsi kukubatsira iwe kuenzanisa.
Panguva ino ndipo iyo X-Rite RuvaraMunki. Neichi calibrator iwe unozokwanisa kukurumidza uye nyore nyore kuyera mavara eayo chero Mac kuitira kuti inyatso kuratidza iro chairo ruvara rwemifananidzo.
Iye zvino, varaidzo vanopedzisa havachafaniri kufungidzira kuti ndeapi mavara achazobuda kana mabasa avo akadhindwa, iro ruvara raunoona pane yako yekutarisa kana purojekita ichave iyo ruvara iwe yaunowana pane iyo purinda. Nezve hunhu hweiyi calibrator isu tinayo:
Multifunctional, tekinoroji yepamusoro uye ergonomic yekuyera mudziyo.
Mahara nharembozha RuvaraTRUE kugadzirisa calcion yemafoni nhare neApple iOS uye Android masisitimu anoshanda.
Easy-to-use software: "Nyore" uye "Yepamberi" ari akapusa kamwe-tinya kana wizard-inotungamirwa nzira.
Akangwara Iterative Kufaira- Tekinoroji inogadziriswa inoyera uye inoongorora kugona kwemavara ekuratidzira kwega kwega kuwedzera kunyatsoita chimiro.
X-Rite Ambient Mwenje Smart Kudzora Mheni Yakarurama - kuyera uye muripo wepasi pekupenya pachiratidziri.
Otomatiki Ratidza Kudzora (ADC), gadzirisa yako yekuratidzira Hardware kuti ikurumidze kuita uye kubvisa zvinyorwa zvemanyorerwo.
Kuenderana neyakajairika mavhidhiyo masisitimu: NTSC, PAL SECAM uye ITU-R Rec. BT.709
Kana iri saizi yayo, sezvaungaona mumifananidzo yatakabatanidza, yakanyatso nyongana uye kuti uishandise iwe unongofanirwa kumhanyisa chishandiso chekushandisa uye uteedzere mirairo inoratidzwa. Mutengo wacho ndeye 187,99 euros asi iwe unogona kuiwana mazuva ano kune 179,99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Kuyera Mac yako screen color neiyo X-Rite RuvaraMunki
Makorokoto! Apple Music inoshandura imwe
Apple inoda kubatsira maartist mukutsinhana kune zvega